युगसम्बाद साप्ताहिक - विपत्ति कम गर्ने उपाय खोज
Wednesday, 01.29.2020, 12:25am (GMT+5.5) Home Contact
विपत्ति कम गर्ने उपाय खोज
Wednesday, 08.20.2014, 01:29pm (GMT+5.5)
मुलुक प्राकृतिक प्रकोपको विपत्तिमा छ । मनसुनले गति लिन थालेदेखि देशका विभिन्न भागमा छिटफुट पहिरो तथा डुबानका घटना घटे पनि साउन १७ गतेयता आएर देशभर नै बाढी, पहिरो र डुबानले सताएको छ । सिन्धुपाल्चोकको राम्चेमा गएको पहिरोको प्रभाव आगामी कैयौं महिनासम्म देखिने छ । नेपाल–चीनबीचको एकमात्र सुविधासम्पन्न नाका यतिबेला बन्द छ । पहिरोले थुनेको सुनकोसी नदीले अरनिको राजमार्ग ध्वस्त बनाएपछि यसले आम जनजीवन निकै कष्टकर बनाउँदै गएको छ । सरकारले वैकल्पिक मार्ग खोल्ने प्रयास गरिरहे पनि निरन्तरको वर्षाले त्यो सहज हुन सकेको छैन । दशैंको मुखमा महंगी बढ्ने देखिएको छ । देशभरमा कति क्षति भयो भन्ने लेखाजोआ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वसम्मका तराई क्षेत्र डुबानमा परेको छ भने पहाडी जिल्लामा पहिरो । अहिलेसम्म देशभरमा २ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने हजारौं घर डुबेका छन्, हजारौं विस्थापित भएका छन् । विपत्तिमा सरकारले जेजस्तो अग्रसरता देखाउनुपथ्र्यो त्यो देखाउन सकेको छैन । प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाहरु उचित राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको प्रतिक्षामा छन् तर सरकारी निकायले सो अनुरुपको कदम चाल्न सकेको छैन । यसको विपरीत देश–विदेशमा रहेका नेपालीहरुबाट ठूलो मात्रामा सहयोग संकलन भएको छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुले पनि सहयोग उपलब्ध गराएका छन् । नेपालीलाई दुःख पर्दा नेपालीको मन नरोए कसको रोला ? भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । विपत्तिको यो घडीमा सम्पूर्ण नेपाली एकजुट हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर यससंगै राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको उदासिनता, झाराटार्ने व्यवहार र विपत्तिको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने कदम चाल्न नसक्दाको परिणाम भने भावी दिनमा अरु दर्दनाक हुने छ ।
हरेक वर्षायाममा पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराईमा डुबान समस्या हुने गरेको छ र यो बढ्दो क्रममा छ । यसले मुलुकको आर्थिक विकासमै ठूलो अबरोध सिर्जना गरिरहेको छ । यस्ता विपत्तिहरु रोक्न नसकिए पनि यसलाई कम गर्न र क्षति घटाउन भने अवश्य सकिन्छ । तराई क्षेत्रको डुुबानको प्रमुख कारण भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा बनाएका बाँध हो भने त्यसपछि चुरेको विनाश । पहाडी क्षेत्रको पहिरोको कारण बन विनाश र विकासका नाममा भौगोलिक अवस्थाको मूल्यांकन नै नगरी हुने उत्खनन् हो । यसले गर्दा नेपालका पहाडी क्षेत्रको भूधरातल कमजोर हुँदै जाँदा पहिरोको सम्भावना बढ्दै गएको हो । त्यस्तै वनजंगलको बिनास अर्को प्रमुख कारण हो । यसलाई रोक्ने दिशातिर अग्रसर नहुने हो भने नेपालको पहाडी क्षेत्र मानवका लागि अभिषाप हुन बेर लाग्दैन भने तराई माछापोखरीमा परिणत हुने खतरा बढ्दो छ ।
प्राकृतिक स्रोत साधनको अनुचित दोहनले प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउने बाहेक अरु केही काम गर्दैन । केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि मुलुकको दीर्घकालीन भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरताले आज मुलुकमा विपत्तिमाथि विपत्ति मडारिएको छ । चुरे तराईको सुरक्षा कवच हो । तर, यतिबेला त्यही चुरे अस्तित्व रक्षाको संघर्षमा छ । सरकारले चुरे संरक्षणका लागि चालेका कदमहरु चुरे दोहन गरेर कमाउन पल्केकाहरुबाट अवज्ञा भैरहेको छ । त्यस्तै वर्षायाम लागेपछि बाँके, बर्दिया, नवलपरासी, चितवन, रौतहट लगायतका जिल्लाहरु ढुबानमा पर्ने गरेका छन् । यसको एउटै कारण भनेको भारतले अनधिकृत रुपमा बनाएको बाँध हो । यो भारतको नेपालको सिंगो तराईलाई जलभण्डारमा परिणत गर्ने दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत अघि बढिरहेको रणनीति हो । यसलाई समयमै रोक्न नसके नेपालले विपत्तिमाथि विपत्ति मात्रै व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । सडक बनाउनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो तर सडक कसरी बन्छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण छ । जमिनको सतहभन्दा ४–५ मिटर माथि उठाएर बन्ने संरचना सडक हो कि पर्खाल हो ? सोचनीय पक्ष छ ।
प्राकृतिक विपत्तिका लागि प्रमुख जिम्मेवार मानिस नै हो । मानिसले प्रकृतिको सन्तुलन नखल्बलिने गरी त्यसको उपयोग गरे विपत्ति निम्तिदैन तर यहाँ पाएको मौकामा लुटिहाल्नुपर्छ भन्ने गलत मान्यताले काम गर्दा अपार स्रोत साधन बगेर जाने खतरा उत्पन्न भैरहेको छ । सिन्धुपाल्चोकको पहिरोले पुर्याएको क्षतिको अहिलेसम्म लेखाजोखा नै छैन । दुईवटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ । देशभर पानी नै पानी छ तर विद्युत उत्पादन घटेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । कृषियोग्य जमिन डुबानमा परेका छन्, बगरमा परिणत भएका छन् । गाउँका गाउँ खण्डहरमा परिणत भएका छन् । यसलाई रोक्ने भनेको मानिसले नै हो । सरकारले प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाहरुका लागि उचित राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको तत्काल व्यवस्था गरोस् र यस्तो विपत्ति दोहोरिन नदिन र बढी क्षति हुन ननि अपनाउनुपर्ने उपायहरु अविलम्ब तय गरोस् ।